Efitrano Fivoriambe Vaovao any Amin’ny Alan’i Amazonia
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Catalan Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Ga Galicienne Galoà Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kabyle Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Krio Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mingrelian Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Huasteca) Norvezianina Oromo Ourdou Ouzbek Pendjabi Persianina Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tajiki Tarasque Tigrigna Tiorka Tlapanèque Tojolabal Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Umbundu Valencienne Xhosa Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Misy Efitrano Fivoriambe vaovao an’ny Vavolombelon’i Jehovah any amin’ny tanànan’i Manaus, any Brezila. Tany mirefy 52 hektara no nanorenana azy io, ary rakotra ala ny ankamaroany. Hita ao ireo hazo mijoalajoala mampiavaka an’i Brezila, ary feno karazam-borona maro loko, toy ny boloky sy tokà, misiotsioka eny amin’ny tendrony. Nahoana no nasiana Efitrano Fivoriambe any?
Any amin’ny 1 450 kilaometatra avy eo amin’ny vavaranon’i Amazone no misy ny tanànan’i Manaus. Efa ho roa tapitrisa ny isan’ny mponina any. Vavolombelon’i Jehovah 7 000 eo ho eo avy ao Manaus sy ny manodidina no hampiasa an’ilay efitrano vaovao. Anisan’izany ireo any amin’ny tanàna manamorona ny reniranon’i Amazone sy ny sakelidranony. I São Gabriel da Cachoeira no tanàna lavitra indrindra, satria any amin’ny 800 kilaometatra mahery any andrefan’i Manaus no misy azy. Mandeha sambo mandritra ny telo andro ny Vavolombelona sasany rehefa hamonjy fivoriambe any amin’ilay efitrano.
Asa be ny nanorina an’ilay Efitrano Fivoriambe tany afovoan’ny faritr’i Amazonia. Tsy maintsy nalefa sambo ireo kaontenera 13 nisy ny fitaovana nilaina. Niainga teo amin’ny seranan’i Santos, any São Paulo, izany ary nanaraka ny morontsirak’i Brezila sy ny reniranon’i Amazone, izay vao tonga tany amin’ny toerana hanorenana an’ilay efitrano.
Io no Efitrano Fivoriambe faha-27 naorina tany Brezila. Notokanana tamin’ny alahady 4 Mey 2014 izy io, ary 1 956 ny mpanatrika. Maro no nihetsi-po satria sambany vao nanatrika fivoriana tao anaty Efitrano Fivoriambe.
Tsy hoe nandre ny mpandahateny fotsiny ny mpanatrika fa afaka nahita azy koa. Nahafaly azy ireo izany fiovana izany. Teny an-kalamanjana mantsy taloha no nanaovana ny fivoriambe, ka betsaka no tsy nahatazana ny lampihazo sy ny mpandahateny. Hoy ny Vavolombelona iray: “Efa ela ihany aho no nanatrika fivoriambe, nefa tsy mba nahita tantara an-tsehatra mihitsy. Feo fotsiny no henoko.” Mahatazana tsara ny sehatra anefa izao ny rehetra.